फेसबुक प्राइभेसीप्रतिको गम्भीर चासो ! दिग्गज कम्पनीहरु फेसबुकबाट अलग्गिदै – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / फेसबुक प्राइभेसीप्रतिको गम्भीर चासो ! दिग्गज कम्पनीहरु फेसबुकबाट अलग्गिदै
ICT Khabar/आइसिटी खबर March 30, 2018	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, लेख/बिचार विवेचना, शिक्षा/चेतना, समाज खबर Leaveacomment 821 Views
टेस्ला कम्पनीका प्रमुख एलन मस्कले आफ्नो फेसबुक पेज डिलिट गरेका छन् । साथै उनले आफ्नो कम्पनी स्पेस एक्स र टेस्लाको फेसबुक पेज पनि डिलिट गरिदिएका छन् ।
टेस्ला र स्पेस एक्सको सिको गर्दै अन्य कम्पनीहरुले पनि फेसबुकसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यद्यपि फेसबुकसँग ती कम्पनीहरुको दूरी स्थायी नभएको हुँदा यसले फेसबुकलाई ठूलो प्रभाव नपार्ने ठानिएको छ ।
उता इन्टरनेट ब्राउजर कम्पनी मोजिलाले बुधबार एक ब्लगपोष्टमार्फत आफुले फेसबुकसँग एउटा विश्राम लिन थालेको घोषणा गर्‍यो ।
फायरफक्स ब्राउजर बनाउने यो कम्पनीले आफ्नो फेसबुक विज्ञापनलाई केही समयसम्मका लागि रोक्ने बताएको छ र अबदेखि उसले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि केही पोष्ट गर्नेछैन ।
यद्यपि मोजिलाले आफ्नो पेज डिलिट गरेको छैन । यदि फेसबुकले आफ्नो प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाका लागि कुनै दहि्रलो कदम उठाएमा वा गोपनियता सेटिंग्समा सुधार गरेमा आफु पुनः फेसबुकमा सक्रिय हुने संकेत उसले गरेको छ ।
त्यस्तै जर्मन बैंक Commerzbank ले पनि फेसबुकमा विज्ञापन दिन छाडेको छ र आफू र डाटा सेक्योरिटीलाई लिएर चिन्तित रहेको जनाएको छ ।
स्पीकर्स लगायतका अन्य विद्युतीय सामाग्री बनाउने कम्पनी Sonos ले पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, गुगल तथा टि्वटरबाट एक हप्ताका लागि विज्ञापन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
यद्यपि यी सबै कारवाहीहरु अस्थायी हुनसक्छन् । तथापि फेसबुकका लागि यो निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो एक हप्तायता जुकरबर्गको संसारभर आलोचना भैरहेको छ । यस हप्ता फेसबुकको शेयर मूल्यमा १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ
Previous मार्क जुकरबर्गले माफी नै मागेपछि…. बन्द होला त फेसबुक !
Next नेपाल मोबाईल वितरक संघमा नयाँ कार्यसमिति, अध्यक्षमा चुल्याद्यो